Himalaya Dainik » ७ किसिमको हुन्छन् यौ’न साथी, तपाईका साथी कस्ता ?
दाम्पत्य सम्बन्ध कति सुमधुर छ भन्ने कुरा उनीहरुको यौ’न जीवनले पनि निर्धारण गर्छ । सफल यौ’न जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने मात्र होइन, निरोगी पनि हुन्छ । तर, यसका लागि त्यो यौ’न क्रि’या रचनात्मक र सक्रिय हुनुपर्छ ।
यौ-नका बिभिन्न तौर तरिका, विधी हुन्छन् । शारी’रिक तथा मान’सिक त’नाव हटाउने विधी पनि हो, यौ’न । यौ’न शा’रीरिक क्रि’या भएपनि यसमा भावना जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यौ’न क्रि’या र त्यसबाट लिने सन्तु’ष्टि सबैमा एकरुपता हुँदैन ।यौ’न साथी एकैखाले हुँदैनन्, धेरै थरीका हुन्छन् । खासगरी पार्टनरको सोचाई, बुझाई आदिले यसमा खास भूमिका खेल्छ ।
याै’नसाथी खास गरेर ७ प्रकार हुन्छन । ती यस प्रकार छन् ।
कति दम्पती यस्ता हुन्छन्, जसको यौ’न जीवन एकदमै खल्लो हुन्छ । कामको बोझ, पारिवारिक त’नाव, रो’ग, सम्बन्ध अदिको कारण उनीहरुमा यौ’नप्रति कुनै रुची हुँदैन । यौ’न मनोविज्ञहरु भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा सबैकुरा ठीकठाक भएर पनि दम्पती यौ’नमा उदासिन हुन्छन् ।’ जो पार्टनर यौ’नमा उदासिन हुन्छन्, उनीहरुले आफ्नो यौ’न क्षमता पनि गुमाउँछन् । कतिले चाहि आफ्नो यौ’न इ’च्छा दबा’एर बस्छन् । यौ’न उदासिनताले पार्टनरबीचको सम्बन्धमा समेत खटपट ल्याउन सक्छ ।
यस्तो दम्पती यौ’न स’म्पर्कका बेला निकै म’स्ती गर्छन् । पार्टन’रलाई उत्ते’जित गराउनका लागि अनेक जुक्ति निकाल्छन् । साथै आफ्ना पार्ट’नरबाट पनि यस्तो अपेक्षा गर्छन् कि, उनले पनि यौ’नमा स’क्रियतापूर्वक सहभागी जनाओस् । यस्ता दम्पती यौ’न सम्ब’न्धको क्रममा यस्तो से’क्सअल फ्यान्टासीबाट प्रेरित हुन्छ । उनीहरुको यौ’न जीवन सफल र स’न्तुष्ट हुन्छ ।
यस्तो दम्पती यौ’न सम्ब’न्धका क्रममा भावनात्मक रुपले पनि आपसमा जोडिने प्रयास गर्छन् । उनीहरुको लागि शारी’रिक क्रि’या दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन् । उनीहरुको लागि यौ’न एउटा माध्याम हो, आफ्ना पार्टन’रसँग सम्बन्ध बनाउने । यस्तो दम्पतीले यौ’न सम्प’र्कका लागि आफ्ना पार्टनरलाई कहिल्यै दवाव दिदैनन् । उनीहरु समझदार हुन्छन् । उनीहरु यौ’न सम्प’र्कका क्रममा पनि एकअर्काको सन्तुष्टिमा बढी केन्दि्रत हुन्छन् ।
यस किसिमको दम्पती जीवनलाई सुमधुर र सुखद बनाउने विधीको रुपमा यौ-नलाई लिन्छन् । उनीहरु आफ्नो दैनिक जीवनयापनका क्रममा आइपर्ने झ’न्झट, त-नाव आदि हटाउनका लागि यौ’नको साहारा लिन्छन् । साथै यौ’न जीवन सफल बनाउन योग, व्यायाम, ध्यान गर्छन् । उनीहरुको सोचाई हुन्छ कि, यौ’न नै तना’व कम गर्ने राम्रो औ-षधि हो ।
यौ’न ल’त भएका पा’र्टनर
कुनै दम्पती यस्ता हुन्छन् मौका पाउनसाथ उनीहरु यौ’नको आ’नन्द उठाउन छाड्दैनन् । पा’र्टनरले रुची राखोस् वा नराखोस्, परिस्थिती अनुकुल होस् वा प्रतिकुल, उनीहरु वेप’र्वाह यौ’नमा तल्लिन हुन रुचाउँछन् । यस्ता पा-र्टनर आफ्नो सन्तु’ष्टिमा केन्दि्रत हुन्छन् ।
यस्ता दम्पती का-मुक प्रवृत्तिका हुन्छन् । उनीहरुमा यौ-नको इ’च्छा एकदमै तिब्र हुन्छ । उनीहरुको स’म्बन्ध जहिलेपनि तातिरहेको हुन्छ । यौ-न मनोविज्ञका अनुसार यस्ता दम्पतीले यौ-नलाई नै महत्वपूर्ण हिस्सा ठान्छन् । यहि कारण यौ-न
सम्ब’न्धका क्रममा उनीहरु आ’क्रमक पनि हुने गर्छन् ।
केहि यस्ता यौ-न साथी हुन्छन्, जो शारी’रिक स’म्बन्धका बेला केवल आफ्नो सन्तु’ष्टिलाई मात्र ध्यान दिन्छन् । उनीहरु चाहन्छन् कि, बेडरुममा आफुले जे चाह्यो पा’र्टनर त्यही अनुरुप प्रस्तुत भइदियोस् । हरेक यौ’न क्रि’या उनी आफ्नो ढंग र रुची अनुसार गर्न चाहन्छन् । पार्टनरको खुसी र सन्तुष्टमा कतिपनि ध्यान दिदैनन् । अनलाइनखबरबाट
यो पनि- अति सं’वेदनशील महिलाको नि’प्पलबारे ६ तथ्य
महिलाको आकर्षणको प्रमुख केन्द्रविन्दु उनीहरुको व’क्षस्थललाई मानिन्छ । अध्ययनका अनुसार कुनै पनि युवतीलाई भेट्दा ८० प्रतिशत पुरुषको पहिलो नजर उनको व’क्षस्थ’लमा ठोकिन्छ ।
पुरुष र महिलाबीचको यौ-न क्रि’डामा पनि व’क्षस्थलको ठूलो भूमिका हुन्छ । वक्षस्थलको पनि केन्द्रका रुपमा ‘नि’प्पल’लाई लिइन्छ । यहाँ हामी महिलाको व’क्षस्थ’ल र नि-प्पलसँग सम्वन्धित केही रोचक जानकारीहरु प्रस्तुत गर्दैछौं -तथ्य १
– जब पुरुष पार्टनरले महिलाको नि-प्पललाई खेलाएर उ-त्तेजित तुल्याउँछन्, त्यसले महिलालाई मदहोश बनाइदिन्छ । यसबाट जोडीबीचको प्रेमको बन्धन झन् बलियो हुन्छ । तर, नि-प्पललाई जथाभावि चलाउनु हुँदैन । महिलाको संवे-दनशीलतालाई बुझेर कोमल हातले चलाउनुपर्छ ।
– महिलाको निप्प-ल उनीहरुका उ-त्तेजनाको एउटा केन्द्र हो । यसको वैज्ञानिक कारण छ । म-स्तिष्कले जननेन्दि्रय उ-त्तेजना र नि’प्पलको उ-त्तेजनालाई उस्तै रुपमा बुझ्ने गर्छ ।
– २० प्रतिशत महिलाहरु केवल नि-प्पलको उ-त्तेजनका भरमा चर-मोत्कर्षमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले तपाईं पनि आफ्नो पार्ट’नरलाई च’रम आ’नन्द दिन चाहनुहुन्छ भने उनको नि-प्पलको भरपुर सदुपयोग गर्नुस ।
– तीव्र नि’प्पल उ-त्तेजनाले महिलाको म’स्तिष्कमा केही परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । कुनै पनि पुरुषले महिलालाई यौ-न स’म्वन्धका लागि तयार पार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै नि’प्पललाई उ’त्तेजित तुल्याउनु हो ।
– एक अध्ययनका अनुसार सँधै घोप्टो परेर सुत्दा व’क्षस्थलको आकार बि’गि्रन सक्छ । त्यसैले कोल्टे फर्केर वा उत्तानो परेर सुत्नु उपयुक्त हुने अध्ययनको सुझाव छ ।
– एक अध्ययनअनुसार महिलाको तुलनामा पुरुषले भित्री वस्त्रको विज्ञापन धेरै हेर्छन् र ब्रा बिक्री गर्ने वेबसाइटमा छिर्छन् ।
नलजाई पा’द्नुका ७ अनाैठा फाइदा
यी अभिनेत्रीको अनुहारमा कुकुरले टो’केपछि…
बिहान उठ्ने बित्तिकै नगर्नुस् ८ काम, गर्नुहोस् ३ काम
रो’माञ्चक यौ-न जी’वनका लागि प्रा-कक्रि’डाको भुमिका ?
श्रीमतीलाई ‘१२ बजे आइपुग्‍छु’ भनेका उनी कहिल्यै नआउने गरि अस्ताए
कालापानी हिँडेका डा. केसी बाटोबाटै किन फर्किए ?
ढाड र पेट दुखेर अस्पताल पुगेकी मिरा कहिल्यै नफर्कने गरी अस्ताइन्
रुकुम घटनाको पो’स्टमा’र्टम रिपोर्ट: शरीरभरि चोट, पेटमा पानी छैन
थपिए ५६ जना ‘कोरोना संक्रमित’
रुकुम घटना: मृतक सबैको टाउकोमा चो’ट देखियो
नवराज र गणेशकाे अ’न्त्यष्टि: बाँचुन्जेल साथमा साथ, मरेपछि एकै घाट
दुई महिनापछि सुनको मूल्य निर्धारणः भयो अहिलेसम्म कै मँहगो
५ दिनदेखि भारतको ओढारमा नेपालीः प्रहरीले लाट्ठी हान्छ, गाउँलेले हँसिया!